တစ်ဦးကအပြုသဘောဆောင်သောအခြေအနေထဲသို့ကိုယ်တော်၏အက်ဆစ် Reflux အကျပ်အတည်းများက Turn | အက်ဆစ် Reflux ဆက်ဆံရန်ကဘယ်လို
အပေါ် Posted February 25, 2021
အက်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်းသည်ပြproblemနာဖြစ်သည်, သင်၏အသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေနိုင်သည်. အဲဒါကိုသိမ်းပိုက်ဖို့လှည်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လုပ်နိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်, သင်မည်သို့သွားရမည်နည်း? အက်ဆစ် reflux ကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားရန်ပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုအတွက်, ဆက်ဖတ်ပါ.
အချို့သောအစားအစာများသည်အက်စစ်ဖလိုဂျင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှိပြီးသားအရည်များကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်. Among them are chocolate, caffeine, alcohol and fried foods. Citrus fruits, tomatoes and other acidic foods are also big contributors. Different people have different triggers, and it will take time to learn which ones affect you. သငျသညျသတိ၏ဘေးထွက်အပေါ်အမှားပြုလိုလျှင်, အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးနှင့်ဝေးဝေးနေပါ.
အစာစားနေစဉ်, remain in an upright position, and remain this way for three hours afterwards. If you don’t, acid is more likely to rise up toward the esophagus. You can provide your esophagus with relief by sitting or standing.
Exercising too strenuously can actually aggravate your acid reflux. ရေကိုစားသုံးပါ. You’ll stay better hydrated this way. Water also facilitates digestion. You can curb acid production in your stomach by using water to promote healthy digestion.
Try to eat slowly. Don’t clean your plate unless you are really that hungry. အစား, eat slowly and stop when you feel satisfied. Savor your meal and chew slowly. Eating too fast or past the point of feeling full can worsen your acid reflux. A good tip to slow the process of eating too fast is to place your fork on the table after each bite.
A food’s relative pH doesn’t really influence whether it will produce acid when you eat it. Lemons, for example, are not acidic after they have been digested. This can be confusing if you have acid reflux. သို့သျောလညျး, by learning about your food’s natural pH, you can help alleviate acid reflux.
သင်တစ် ဦး အစားအစာရဲ့ alkaline များက၎င်း၏ဆွေမျိုးသော pH အဆင့်ကိုဆက်စပ်ခြင်းမရှိကြောင်းသတိထားမိပါသလား? Foods that seem acidic, ထိုကဲ့သို့သောသံပုရာအဖြစ်, become alkaline after digesting them. This isabit confusing if you have acid reflux. သငျသညျအက်ဆစ် reflux နှင့်အတူအသက်ရှင်လျှင်ကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာများ၏ pH ကိုအဆင့်ဆင့်အကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
categories: အက်ဆစ် Reflux
Tags:: အက်စစ် reflux တွေ့ကြုံခံစား, မကြာခဏအစားအစာများ, ပိုဆိုး reflux, ဆွေမျိုး ph, အစာအိမ်အက်ဆစ်
အက်ဆစ် Reflux ၏ရောဂါလက္ခဏာများထိန်းချုပ်ခြင်း; ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုသိကောင်းစရာများ »
မည်သူမဆိုကိုသုံးပါနိုင်သလားဒါကအက်ဆစ် Reflux အကြောင်းဂရိတ်အကြံပြုချက်များ
Acid Reflux နှင့်ဆက်ဆံသည့်အခါအကြံဥာဏ်အချို့.
သင့် Acid Reflux ကိုပိုင်ဆိုင်ပါ; ဤထိပ်တန်းအကြံပြုချက်များကိုသုံးပါ
ဒီစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ Acid Reflux စိတ်သောကကိုဘေးတိုက်ထားပါ
သင့်ရဲ့အက်ဆစ် Reflux Disease နေရပ်လိပ်စာစေရန်သက်သေပြကုသမှု
အက်ဆစ် Reflux အရေးအခင်း? ဤတွင်သင်သိသင့်သကဘာလဲ